Nepal Dayari | भर्खरै देशभरबाट आयो निक्कै दुखद् खबर, बाढीपहिरोको यस्तो बितण्डा: ठुलो क्षति, १७ राजमार्ग अवरुद्ध !
भर्खरै देशभरबाट आयो निक्कै दुखद् खबर, बाढीपहिरोको यस्तो बितण्डा: ठुलो क्षति, १७ राजमार्ग अवरुद्ध !
असार २०, २०७८ आइतबार ५४४ पटक हेरिएको
यो पनि पढ्नुहोस् : खास गरी गर्मिको मौसममा दुध फाट्ने गर्दछ । जसको कारणले मानिसहरु यो फाटेको दु’धलाई फ्याक्ने गर्दछन् । तर तपाईलाई थाहा छैन होला फाटेको दु’धमा प्रोटीनको मात्रा सबैभन्दा बढी हुन्छ।जसले श’रीरको इम्यूनटी सिस्टमलाई बुस्ट गर्ने काम गर्दछ । यसले मानिसको श’रीर स्व’स्थ र निरो’गी हुन्छ । डा’क्टरको अनुसार फाटेको दुधको पानी सेवन गर्नाले हार्टस्ट्रोक को खतरा कम हुन्छ ।
साथै यसले हृ’दसम्बन्धि कार्य प्रणलीलाई राम्रो बनाउँछ । त्यसैले फाटेको दुधको पानी पिउनुपर्छ । यसले तपाईलाई हृदयघा’त सम्बन्धि रो’ग लाग्नसक्छ । फाटेको दुधको पानीले श’रीरको मां’सपेशीलाई मजबुत बनाउन मदत गर्दछ । यसले मां’सपेशीलाई कुनै नोक्सान पु्र्याउँदैन तथा र’गत सञ्चालन पनि सही तरिकाले हुनेगर्छ । यसले मानिसको कहिलेकाँही खुट्टा मड्किने, नशा च्याप्पिने स’मस्याबाट पनि निजात मिल्दछ ।
फाटेको दुधको पानी कपालमा लगाउनाले क’पाल सिल्की र मुलायम हुने गर्दछ। साथमा कपालमा चायाँ पर्ने स’मस्याबाट पनि यसले मुक्ति दिन्छ । यदि तपाईको अनुहारमा दाग, धब्बाको स’मस्या छ भने पनि फाटेको दुधको पानीले यसलाई धेरै नै फाइदा हुन्छ । यसले दाग धब्बाको स’मस्या खतम हुन्छ । यसको पानीलाई आफ्नो अनुहारमा लगाउनुहोस् ।